Maxaa keenay in Lamaanaha Soomaaliyeed badankoodu aysan uwada dhaqmin Romantic - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Maxaa keenay in Lamaanaha Soomaaliyeed badankoodu aysan uwada dhaqmin Romantic
Ereyga Romantic ma’ahan mid ay diintu diidantahay waana Kalgacal ay diintu ku farayso in lamaankaaga siiso raxmad iyo qalbi furnaan waxaase jira dhowr qodob oo inta badan carqalad ku ah Lamaanaha Soomaalida.
Guurka kadib dad badan oo Soomaali ah waxa ay aaminsanyihiin in ay isku dhamaatay haasaawihii wada hadalkii ereyadii macaanaa & qalbi furnaantii ay labada lamaane isa siin jireen markii ay wada haasaawayeen.
Aniga ahaan waxaan aaminsanahay in Macaanida labada lamaane bilaabato guurka kadib maadama ay xor uwada yihiin in waqtigaas buundo waliba isaga talaabaan oo aysan jirin xuduud markaasi kala celin karta ( XALAAL )
Waxaa jira Ragg fara badanoo Soomaali ah iskuna dayay in ay u dhaqman sida Muslimiinta caalamku xaasaskooda ula dhaqmaan siiyaan kalgaceyl iyo jaceyl xad dhaaf ah , Alhamdulilah waa karti waana waajib ay ksoo baxeen maxaase ka danbeeyey.
Markii ay dhacdo in la ogaado sida uu xaaskiisa ugu jilcanyahay waxaa durbaba suuqa la galinayaa war hebel ma ogtahay in ay heblaayo sixratay maba kasoo baxo guriga , caruurta sidii dumarkii oo kale ayuu gaariga ku jiid jiidayaa , Suuqa ayuu kala soo adeegayaa , sidii dumarkii oo kale ayuu guriga ka dhex shaqeynayaa.
Yaa Rabi Walahi waa kaas midka sida dhabta ah
xaaskiisa u wanaajiyey waa run waa ayna sixratay balse sixirkii sharciga ah ayeey sixirtay waxayna u noqotay raaliyo farxad galisa qalbigiisa waxay ka kasbatay jaceyl waxayna tustay qalbi furnaan iyo sida ay ugu qanacsantahay.
Ma’ahan qof kaliyah mida ay ku dhacday kala geynta iyo isku dirista labo is jecel , labo is qabta , iyo kuwa noloshooda ku qanacsan , Hubaal weeye in labadii wanaag ku heshiisa mid fashiliya kusoo biira waxaase aniga ila wanaagsan in Kalsoonida la dhowro.
Qalbiga bini adamka oo ah mid aad u jilicsan kana waxa dunida ugu jilicsan ee xinjiraha dhiiga miyaan la badali karin dabeecadihiisa , wax waliba waa isku day walaalka Soomaaliyeed si uu uga yaraado Furiinka dadkeena kamid noqo Ragga iyagu aanan fursada siinin nacaska kala geeya Lamaanaha.
Fariimo fara badan oo aan u gudbinayo Lamaanaha Soomaalida waxaan kusoo daabici doonaa Wargane.com waxaan rajeynaa inaad kawada heli doontid qaabka loo aas aaso Qoys farxad ku dhisan.